नागमणी के हो ? किन करोडौ पैसा को खेलवाड हुन्छ ? के फाईदा हुन्छ ? | Rajmarga
नागमणी के हो ? किन करोडौ पैसा को खेलवाड हुन्छ ? के फाईदा हुन्छ ?
पौराणिककाल देखिनै सर्पसंग जोडिएका सयौं मान्यता समाजमा फैलिएका छन्। यी मान्यतामा केही अन्धविश्वास पनि नजोडिएका हैनन, जुन सदियौं देखि डरका कारण बन्दै आएका पनि छन्। यहाँ सर्पसंग जोडिएका यस्तै अन्धविश्वासको बारेमा चर्चा हुदैछ,
खेल-तमासा देखाउने केही मानिस धुन बजाएर सर्प नचाउने दाबी गर्छन। तर यो पुरै अन्धविश्वास हो किनकी सर्पको कान हुदैन। हावामा हुने ध्वनि तरङ्का सर्पले त्यति ध्यान दिन सक्दैन तर जमिन भित्र वा जमिनको सतहमा हुने कम्पनलाई भने एक विशेष हड्डिको सहयताले पत्ता लगाउँछ। सर्पले विशेष गरि हिडडुल गर्ने वस्तुहरुलाई राम्रो संग देख्न सक्छ।
सर्प नचाउने भन्ने धुन बजाउदा सर्पले सो बाजा चलेको संगै आफ्नो शरिर भने चलाउने गर्छ। तर कुनै धुन सुनेर सर्प नाचेको भने होइन। केही सर्प विषालु हुन्छन्। गर्मी महिनामा सर्प जमिनको सतहमा बढी देखिने गर्छन्। सावधान रहेर सर्पको टोकाइबाट बच्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ। एजेन्सी
Previous post: प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई यस्तो ब्रिफिङ गरे
Next post: नेपालमा पनि बढ्दो ‘लिभिङ टुगेदर’ : किन सहज छैन महिलाको लागि ?